Global Voices teny Malagasy » Maldiva: Teknika Fampijaliana Any am-Paradisa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Jolay 2017 17:59 GMT 1	 · Mpanoratra Nihan Zafar Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsimo, Maldiva, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Marihan'ny bilaogy Groundsix ny sasantsasany amin'ireo teknika fampijaliana nampiasaina  tamin'ireo voasambotra sy voafonja tao Maldiva.
Fampilanjàna hazon'olomeloka: Giazana anaty lavaka tery kely amin'ny hazo ny hatotongotra sy ny hato-tànan'ilay gadra. Miforitra ilay gadra ary tsy afaka mampiasa ny tànany rehefa hisakafo. Eo an-toerana ihany no mangery sy mipipy ary dia mijanona miaraka amin'ny lotony eo mandritry ny andro maro ilay olona. Ireo tratry ny hazon'olomeloka dia tratry ny aretin'ny hazondamosina mandra-maty avokoa ny ankamaroany, raha tafavoaka velona amin'io sedra io ry zareo.
Fanolànana ataon'andiany amin'ireo vehivavy mifonja. Indraindray dia asaina mijery an'io ireo vehivavy mpiray efitra ao am-ponja mba handonana sy hampijaliana ara-tsaina azy ireo. ( Fantatra fa nananton-tena ireo izay noterena hanatrika azy ity)
“Ahitsoka an-joro”: Alefa any ambadik'ireo tsivalamby mijidina (mielanelana 60 sm eo) ery ambonin'ny karakara amin'ny varavaran'ny efitranon'ny fonja ny tanan'ilay olona. Voageja mafy amin'ny rojo vy ny hato-tànana. Mihantona manditry ny ora maro mitohy ny vatana. Tratry ny soroka sy / na kiho mivika ny ankamaroan'ireo iharan'ity famaizana ity. Daroka tsy misy fanavahana. Matetika no manao kiraro toy ny an'ny miaramila ireo manampahefana ao am-ponja ary manitsakitsaka ireo voafonja. (Tanaty tranga iray voatatitra tsara mihitsy, tanora iray 17 taona no voadaroka tany amin'ny faritry ny hazondamosiny, tao amin'ny efitrano fakàna am-bavany. Nalemy mandra-maty izy io.)
Nampiasaina betsaka tao Maldiva ny fampijaliana mba hanohanana ny fitondràna amperinasa. Ny fikambanana ho fisorohana ny fampijaliana sy ny fanaovana tsinontsinona ao Maldiva dia naharakitra tranganà marobe miresaka fampijaliana. 
Ny fitomboana vao haingana hita amin'ny herisetra ataon'ny polisy no nanosika ny Antoko Demaokraty Maldiviana (MDP) hanao fihetsiketsehana. 
Toerana lehibe fitodiana sy fanaovana fialantsasatra no ahafantaran'izao tontolo izao an'i Maldiva. Asehon'ny antontanisan'ny fizahantany tamin'ny Janoary 2017 ny isa faratampony tamin'ny fitsidihan'ireo mpizahatany.  Ny fikambanana iray manana foibe any Royaume-Uni, Friends of Maldives (FOM) – Naman'i Maldiva – no nisantatra ny Fanaovana Ankivy ireo Toerana Fialantsasatra Voafantina ao Maldiva  mba hanakiviana ireo mpizahatany tsy handany ny fotoana fialantsasatr'izy ireo any amin'ireo toerana fialantsasatra izay manana fifandrohizana amin'ny mpitondra amperinasa. Ambaran'ny FOM fa ilay ankivy dia tsy natao hanakanana ny olona tsy hitsidika an'i Maldiva. 
Angatahan'ny FOM ireo mpizahatany mba hanao safidy voasaina tsara momba izay toerana hofidian'izy ireo handaniany ny fialantsasatra. Raha mifidy ity toerana fialantsasatra an'i X ity ianareo dia midika fa hanohana lehilahy iray izay manohana mivantana ireo jadona 28 taona nataon'ny filoha Maumoon Gayoom – Raha mifidy toerana iray fialantsasatra TSY hita ao anatin'ity lisitra ity ianareo dia ho afaka hisitraka sy hankafy tanteraka ny fialantsasatrareo – tsy misy iasàna saina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/19/103969/
 Groundsix ny sasantsasany amin'ireo teknika fampijaliana nampiasaina: http://groundsix.blogspot.com/2007/02/torture-techniques-in-maldives.html
 naharakitra tranganà marobe miresaka fampijaliana.: http://www.aptim.org/
 hanao fihetsiketsehana. : http://www.minivannews.com/news/news.php?id=2962
 ny isa faratampony tamin'ny fitsidihan'ireo mpizahatany.: http://www.sunandsea-maldives.com/blog/2007/02/record-number-of-tourists-in-january.html
 Fanaovana Ankivy ireo Toerana Fialantsasatra Voafantina ao Maldiva: http://www.friendsofmaldives.org/fom-selectiveboycott.htm
 ankivy dia tsy natao hanakanana ny olona tsy hitsidika an'i Maldiva.: http://www.minivannews.com/news/news.php?id=2958